Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Maqaska | Warshadda Maqasyada Shiinaha
Maqal-sheegis Ey Xirfad Leh
Qalabka maqaayada xayawaanka ee xayawaanka ah
Qalabka maqaska xayawaanka lagu xanaaneeyo waxaa ka mid ah maqas toosan, maqas garbaha lagu gooyo, maqas qalooca, iyo shanlo toosan. Waxay la timid boorso maqas ah, wax walba oo aad u baahan tahay ayaa halkan yaal.
Qalabka maqaska xayawaanka lagu xanaaneeyo ayaa ka samaysan bir bir ah oo aan fiicnayn. Maqasku waa fiiqnaan sare, waara oo shanlada ayaa xoog u leh isticmaalka muddada dheer.
Caaggu on maqasku kaliya ma yareyn karo buuqa si loo hubiyo in xayawaanku uusan cabsan doonin, laakiin sidoo kale wuxuu ka fogaanayaa dhaawaca gacanta ku shiidaya.
Qalabka maqaska xayawaanka lagu xanaaneeyo waxaa lagu hayaa boorso, waxay ka dhigeysaa wax fudud inay qaadaan oo ay sii hayaan. Qalabkani wuxuu ku habboon yahay dhammaan baahiyaha iyo shuruudaha xayawaankaaga.
maqas qurxinta eyda qalooca
Maqaska qaloocinta eeyaha ayaa aad ugu fiican jarista hareeraha madaxa, dhegaha, indhaha, lugaha qalafsan, iyo cagaha.
Cirifka afaysan ee fiiqan wuxuu siiyaa dadka isticmaala khibrad goyn ah oo xasilloon, markaad isticmaaleyso maqaskan eyda lagu daaweynayo boggiisa jiidi maysid ama jiido.
Naqshadaynta qaab dhismeedka injineernimada waxay kuu oggolaaneysaa inaad iyaga si raaxo leh u xajiso oo aad u yareyso cadaadiska garabkaaga. Maqaskan qurxinta eeyaha qalooca wuxuu ku yimaadaa faro iyo suul galin si uu gacmahaaga ugu habo qabsasho raaxo leh inta aad goyneyso.